Iileta zokugxothwa ngendlela engenabulungisa kunye neendlela zokugxothwa | Ezezimali
Ileta yokugxothwa engenabulungisa
Ukugxothwa kuchazwa njengesigqibo somphathi, umqeshi okanye umqeshi sokuphelisa ubudlelwane phakathi kwakhe nomqeshwa.
1 Ukugxothwa kunokuhlelwa ngokweempawu ezithile:
2 UKUGXOXWA KOQEQESHO:
3 INJONGO UKUGXINYWA.
4 UKUGXINYWA NGOKUQOKELELAYO.
5 Emva kokugxothwa, ngaba kunokwenzeka ukuba ufikelele ukungabikho kwemisebenzi?
6 UKUGXOWA NGOKUNGENABULUNGISA.
Ukugxothwa kunokuhlelwa ngokweempawu ezithile:
Ukugxothwa koluleko: Xa umqeshwa ethe waphula umthetho kakhulu emsebenzini.
Ukugxothwa kwenjongo: Xa umqeshi ethatha isigqibo sokubuphelisa ubudlelwane bokuqeshwa kwaye aphelise ikhontrakthi yomsebenzi kwaye ethethelela ukugxothwa ngezizathu ezininzi ezinenjongo.
Ukugxothwa ngokudibeneyo: Xa ukugxothwa kweenjongo kuchaphazela inani elikhulu labantu abakwinkampani enye.
Ukugxothwa ngokungafanelekanga: Xa umqeshi engabonakalisi ukophulwa kwabasebenzi, oko kukuthi, akufezekiswa iimfuno ezisemthethweni zokumgxotha.
Apha ngezantsi siza kuchaza nganye nganye kunye neempawu zayo ngokweenkcukacha kunye nemizekelo ukuze wahlule kwaye uyiqonde ngcono.
Olu hlobo lokugxothwa kuxa umqeshi, ngenxa yolwaphulo olungenakuthetheleleka okanye olunzulu, esenza isigqibo sokuphelisa ubudlelwane bengqesho phakathi kwaba babini.
Ngokwenqaku lama-54 lomthetho wabasebenzi, la manyathelo alandelayo abizwa ngokuba kukwaphula umthetho kwabasebenzi:
1. Ukungabikho emsebenzini kungekho rhoqo, njengokufika emva kwexesha emsebenzini.
2. Abasebenzi abangaqeqeshekanga kwaye abawuthobeli umthetho kwindawo yokusebenza.
3. Ubundlobongela ngokwasemzimbeni okanye ngamazwi ngokuchasene nomqeshi okanye nawuphina umntu osebenza naye ngokunjalo nezihlobo ahlala nazo.
4. Xa kukho ukusetyenziswa gwenxa kokuthenjwa ngumqeshi ngakumqeshi.
5. Ukusilela ekuthobeleni umsebenzi ekuvunyelwene ngawo ngexesha lokuqeshwa okanye ukuba ukusebenza koku kuyehla okokoko.
6. Ukusela utywala okanye iziyobisi kuze oko kuchaphazele umsebenzi womqeshwa.
7. Ukuphathwa gadalala ngokwesondo kwabaqeshwa okanye ngumqeshi kunye nocalucalulo olusekwe kubuhlanga, inkanuko yesini, ubudala, inkolo, phakathi kwabanye, ngokuchasene naye nabani na osebenza naye.
Umzekelo weleta yokugxothwa koluleko.
ULuis usebenza kwindawo yokutyela. Ngaphantsi kwenyanga ephelileyo wayenengxabano nomnye umntu asebenza naye; Ngesi sizathu, isohlwayo safakwa ku-Luis apho kwachazwa ukuba wenza ityala elibi, wamiswa emsebenzini iintsuku ezili-10 ngaphandle kwentlawulo. Kodwa kwiveki ephelileyo imeko ibiphindaphindwe nomnye ugxa, kodwa kweli tyeli waya kumbetha Ngesi sizathu, inkampani igqiba kwelokuba ikhethe ukugxothwa kwenkqubo yoluleko efakwe kuLuis ngokuhlasela umntu asebenza naye.
Kodwa oku akupheleli apha, kuba this uhlobo lwezivumelwano ezihlangeneyo Bahlala benecandelo apho kulungiselelwe ukungaziphathi kakuhle kunye nezohlwayo ezihambelanayo kwaye, kwimeko yokungaziphathi kakuhle kakhulu, banokohlwaywa ngokugxothwa komqeshwa.
Este uhlobo lokugxothwa kululeko, inokuqwalaselwa njengefanelekileyo, engamkelekanga okanye engenanto.
Ukugxothwa. Xa izizathu okanye izizathu ezichazwe kwileta yokugxothwa ziboniswa ngokupheleleyo. Ukongeza kwinto yokuba umqeshi akazukuhlawula naluphi na uhlobo lwembuyekezo kulowo wayesakuba ngumsebenzi wakhe.
Ukugxothwa ngokungafanelekanga. Xa oonobangela abakhankanyiweyo kwileta yokugxothwa bengenakungqinwa ukongeza ekubeni bengakhange balandele iimfuno ezazifunwa ngokusemthethweni. Kule meko, umqeshi kufuneka enze isigqibo phakathi kokubuyisela umsebenzi kumqeshwa wakhe okanye ambuyekeze, ukuba ukhetha lo mva, kufuneka amhlawule iintsuku ezingama-33 zomvuzo ngonyaka asebenze ngawo, umda weentlawulo ezingama-24 zenyanga.
Ukugxothwa okungafunekiyo. Xa kukho ucalucalulo lwalo naluphi na uhlobo, umzekelo: ukugxothwa ngenxa yenkolo eyahlukileyo, ukhetho lwakho ngokwesondo, ibala lolusu okanye inkangeleko ngokubanzi. Umqeshwa kufuneka abuyiselwe emsebenzini, ambeke kwakwindawo apho ebesebenza khona, ukongeza ekumhlawuleni umvuzo awayeyekile ukuwufumana ukusukela mhla wagxothwa.
Luhlobo lokugxothwa apho ikhontrakthi yengqesho ipheliswa ngenxa yoqoqosho okanye umbutho okanye ubuchule bemveliso yinkampani.
Izizathu ezichaziweyo zisekiwe kwinqaku 52 le-ET.
Umzekelo wencwadi yokuphelisa injongo.
U-Laura wasebenza kwinkampani evelisa amalaphu, kodwa nge-11 kaJuni yaphela ikhontrakthi ngenxa yokugxothwa, kwaye kule meko wanikwa ileta, apho inkampani yatyhola izizathu zoqoqosho, kuba inkampani ithi yayihamba nelahleko engagungqiyo ye-5. iminyaka.
Ngendlela efanayo nokugxothwa ngokungekho sikweni, ukugxothwa ngokungagungqiyo, kunokuba yinto efanelekileyo, engenabulungisa okanye engenanto, ukuba umqeshwa ucela uncedo kwezomthetho ukwenza umngeni.
Olu hlobo lokugxothwa lunelungelo kwimbuyekezo yeentsuku ezingama-20 zomvuzo ngonyaka owawusebenzela inkampani ubuninzi beentlawulo zenyanga ezili-12.
Olu hlobo lokugxothwa lwenziwa xa ukugxothwa ngokudibeneyo kuqala kwaye kuchaphazela inani elininzi labasebenzi abasebenza kwinkampani enye.
Kuthathwa njengokugxothwa ngokudibeneyo xa:
Abasebenzi abalishumi bayagxothwa kwinkampani enye enabasebenzi abali-10 bebonke abakuyo.
I-10% yenani labasebenzi abasebenza kule nkampani inenani labasebenzi abaphakathi kwabali-100 ukuya kuma-300.
Ngama-30 abasebenzi kwimeko yeenkampani ezinabasebenzi abangaphezulu kwama-300 abazisebenzelayo.
Ngendlela efanayo nokugxothwa ngenjongo, kwimeko yokugxothwa ngokudibeneyo, kuya kufuneka ubuyekezwe ubuncinci beentsuku ezingama-20 zomvuzo wakho kunyaka omnye wokusebenza kwinkampani enomda weenyanga ezili-12.
Umceli mngeni wokugxothwa, ongamkelekanga okanye ongenanto.
Kwimeko apho umsebenzi engonelisekanga kukugxothwa okwenziwe kuye yinkampani apho ebesebenza khona, into ekufuneka eyenzile kukwenza umceli mngeni wezomthetho, kodwa oku kufuneka kwenziwe zingaphelanga iintsuku ezingama-20 zomsebenzi, uthe umceli mngeni uyenziwa ngokusebenzisa uxwebhu lokuvota.
Emva kokwenza umceli mngeni, ijaji yiyo ejongene nokubhengeza ukugxothwa kufanelekile, kungamkelekanga okanye kulilize. Ukuba ibhengeziwe yamkelekile, oko kuthetha ukuba inkampani iyithobele yonke imimiselo yezomthetho ukuthethelela ukugxothwa ngenxa yeengxaki zangaphakathi.
Emva kokugxothwa, ngaba kunokwenzeka ukuba ufikelele ukungabikho kwemisebenzi?
Nokuba ityala liyagxothwa (loluleko, injongo okanye injongo) Umsebenzi uphantsi kwemeko esemthethweni yokungaphangeli kwaye ngenxa yesi sizathu ungacela izibonelelo ezibonelelwe yintswela-ngqesho kwaye ke, unelungelo elipheleleyo lokucela izibonelelo zokungaqeshwa ezingqinelana nawe malunga neminikelo oyifumene.
Ngexesha lokucela ukungabikho kwemisebenzi, ukugxothwa kufuneka kugunyaziswe ngesatifikethi senkampani. Ukuba umsebenzi wenza ibango malunga nokugxothwa, uyakufakwa kumthetho woxolelwaniso, nokuba ngowolawulo okanye wezomthetho, ngendlela efanayo nangesigwebo esisemthethweni sokuba ukubhengezwa kokugxothwa okufanelekileyo okanye okungafanelekanga kwenziwa.
Ukuba ukugxothwa kwamkelekile, kuya kufuneka kuqinisekiswe ukuba umqeshi okanye umqeshwa akakulungelanga ukubuyiselwa emsebenzini.
Kukho izizathu ezi-2 ezenza isibhengezo sokungamkeleki ekugxothweni:
1. Iimfuno ezisesikweni ezazifuneka ngokwasemthethweni azifezekiswa ngaso nasiphi na isizathu.
2. Izizathu ezinikwe ngumqeshi aziphikisani ngokusemthethweni nokugxothwa, abakubiza ngokuba "sisizathu esibambekayo sokugxothwa."
Apha ngezantsi sidwelise iimfuno ngokubanzi zokugxothwa ekufuneka zibenazo, nokuba loluphi uhlobo:
Isigqibo senkampani sokungaqhubeki nokuyisebenzisa kufuneka ngaso sonke isikhathi saziswe ngokubhalelwa umsebenzi kwaye iyimfuneko engenakuphepheka.
Chaza izizathu kunye nenyani yolwaphulo-mthetho olunikwa umqeshwa, ukuba ngaba yinkqubo yokugxothwa koluleko; okanye ukuba kungenxa yokugxothwa ngenjongo, izizathu ezikhokelele kwisigqibo sokuphelisa abasebenzi abaphantsi kolawulo lwabo kufuneka zichazwe.
Umhla apho ukugxothwa kuya kuqala ukusebenza makuchazwe, kwaye oko ngokucacileyo akufuneki kungqamane nomhla apho isigqibo sokupheliswa kweenkonzo zabo sasixeliwe. Umzekelo, umsebenzi unokwaziswa kwiinyanga ezimbalwa kwangaphambili ngaphambi komhla wokugqibela wokugxothwa.
Iifayile eziphikisanayo akufuneki ziqhutywe kwimeko yokugxothwa koluleko kubameli babasebenzi okanye kubathunywa babasebenzi, kunye nokungamameli umsebenzi ochaphazelekayo, okanye amalungu enza umanyano lwabo. Nokuba ngaba le yivenkile ethengisa izinto kwaye inkampani iyayazi le meko yomqeshwa.
Ukusilela ekuthobeleni nayo nayiphi na kwezi mfuno zisesikweni kungakhokelela ekubeni ukugxothwa kubekwe njengokwamkelekileyo.
Kubalulekile Gxininisa ukuba umqeshi nguye onyanzelekileyo ukuba abonakalise oonobangela eziye zabonakaliswa kwileta yokugxothwa.
Nokuba iimfuno ezisesikweni ziyafezekiswa na, isigqibo esingasekhoyo siya kuqondwa njengengamkelekanga ukuba umsebenzi akasiniki sizathu saneleyo sokugxothwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Ileta yokugxothwa engenabulungisa
Ngaba ungaphila ngokukhethwa kokubini?
Ukuba ubutyalile kwiminyaka eli-10 eyadlulayo ubuya kuba ngusozigidi